Kachasị Linux nkesa kacha mma | Site na Linux
Obere-distros n'ihi na ìgwè na ego nke obere ma ọ bụ obere ngwaike dika bulie os Dabere na Linux, enwere ọtụtụ ihe ịhọrọ na ule, lee m kpọtụrụ ụfọdụ.
1 Kedu ihe bụ nkesa nkenke Linux?
Kedu ihe bụ nkesa nkenke Linux?
Obere nkesa Linux bu ihe di iche nke sistemu ahu nke choro itinye usoro ihe omuma zuru oke n'ime draịva nchekwa di ike dika disk.
Distributiondị nkesa a na-enye anyị ohere ịrụ ọrụ na gburugburu Linux zuru oke na-amalite site na floppy disk ma ọ bụ igodo USB ma na-ejighị diski ike nke kọmputa nwere ike ịnwe, si otú a na-ezere nnyonye anya ọ bụla na sistemụ arụnyere na kọmputa. Ma n'ihi ntakịrị ojiji nke akụ ya, nke kachasị njọ bụkarị RAM, nke n'ọtụtụ ọnọdụ ga-abụ 8 Mb nke RAM, yabụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kọmpụta ọ bụla bara uru maka ya.
Opekempe arụ ọrụ: n'etiti 1Mb na 50Mb
Opekempe eji akụ: 4-8 Mb RAM na i386 processor
Jiri Ram dị ka faịlụ faịlụ: / dev / ram-n
Ha anaghị achọ diski ike:
Ha na-ekwekarị ka akụrụngwa jikọọ na netwọkụ ma gụnye ndị ahịa yana mgbe ụfọdụ sava nke ọrụ ndị dị mkpa dịka ftp, http, telnet ma ọ bụ ndị ọzọ
Ntinye sitere na MS-DOS, GNU / Linux, ma ọ bụ na-enweghị mkpa maka sistemụ arụmọrụ, dị ka sistemụ LiveCD.
Nnọọ mfe echichi.
Enyemaka diski iji tinyekwuo arụmọrụ.
Iji RAM dị ka ngwaọrụ nchekwa na-eme ka sistemụ ọsọ ọsọ rụọ ọrụ, ebe nchekwa dị na RAM dị nnọọ ngwa ngwa karịa nchekwa na ngwaọrụ ọ bụla ọzọ. Mana ojiji a bụ nke na - emekarị ka PC PC gafere 4Mb nke RAM, ma ọ bụghị na iji sistemu ahụ adịghị njọ. Ewezuga ngwaọrụ nchekwa "/ dev / ram-n" a na-echekwa maka kernel nke sistemụ arụmọrụ yana maka ngwa ndị eji. Anwansi nke ịrụ ọrụ na-enweghị diski ike na-adabere n'iji RAM dị ka onye nnọchi maka diski ike na disk diski.
Ihe ndị a bụ ndepụta nke nkesa Linux iji pịgharịa igwe ndị ahụ na-erughị n'oge a, nke ọ na-agaghị ekwe omume ịnụ ụtọ nkesa nke oge a 100%, n'ihi njedebe nke ngwaike.
Ọdịdị: New Debian based mini-distribution for novice users and mfe iji wụnye.
Austrumi: Ọzọ ndụ nkesa obere size, sonso 50MB. Enweghi mmasị, ma ọ bụghị nke obere mma. Dabere, dị ka ọtụtụ, na Slackware. Na-arụ ọrụ nke ọma na Pentium na mgbe e mesịrị kọmputa. Jiri nlezianya mara ihe ngosi, ya na Enlightenment.
BasicL Linux: Obere nkesa a haziri iji weghachi 486 nke ụbọchị. Dabere na Slackware ọ na-agba ọsọ site na floppy disk na-eji RAM.
Brutalware: Obere nkesa maka nhazi oru na TCP / IP
Linux Coyote: Dị iche iche nke Linux Router Project, ọ na-agba site na otu floppy disk wee tụgharịa PC ochie ahụ ị debere n'ime kaboodu n'ime rawụta nwere ike ijikọ netwọkụ mpaghara gị na Internetntanetị.
Damn obere Linux: Obere nkesa na cd dị ndụ n'ihi ntakịrị obere ya, nwere ike ije ozi dị ka nnapụta nnapụta ma ọ bụ iji ya na igwe nwere obere nhazi.
DeLi Linux: Acronym maka Desktọpụ Ìhè Linux, ọ nwere ike ịrụ ọrụ were were na 486 ọnụ na 16MB nke RAM. XFree gburugburu ebe obibi na-arụ ọrụ ma bụrụ ihe sitere na Slackware.
Okechukwu: Nke a Obere-nkesa-enye gị ohere itinye a static rawụta na firewall functionalities.
microLINUX_vem: Nkesa izi ihe nke GNU / Linux n'asụsụ Spanish, na ọnọdụ ederede, akpakọbara na 1.44 Mbyte floppy disk ma ọ bụ ka agba ya na windo sistemụ Windows.
MoviX: Self-bootable multimedia Obere-nkesa si CD na arụ orụ di iche iche nke multimedia faịlụ na MPlayer.
MuLinux: Obere nkesa nwere ike itinye na diski ike. Ọ bụ otu n'ime nkesa kachasị nta, ọ na-adị mfe itinye ya na kọmputa ochie.
Linux Puppy: Ọ bụ nkesa dị ndụ, yana enwere ike itinye ya na diski ike. Ọ na-achọ obere RAM, ma na-achọ ịgba ọsọ nke ọma na kọmputa ochie. Na-enye Fvwm95 na JWM abụọ.
Linux SliTaz: Ezubere iji rụọ ọrụ na ngwaike yana 128 Mb Ram. Ọ nwere 30 Mb nke CD na 80 Mb na diski ike ozugbo arụnyere. Site na 16 Mb nke RAM o nwere njikwa window JWM (na ụdị isi nri ọ bụ LXDE).
Obere Linux: Obere-nhazi nke eji eme ihe na kọmputa.
Obere Core Linux: Tiny Core Linux bụ obere desktọọpụ Linux dị obere (10MB). Ọ dabere na Linux 2.6 kernel, BusyBox, obere X, FLTK GUI, na njikwa windo flwm, na-agba ọsọ na ebe nchekwa.
Tinyme: TinyMe bụ Linux dabeere na unit mini-nkesa. Ọ dị iji kwado ntinye nke Unity Linux na kọmpụta ochie, iji nye nwụnye ntakịrị maka ndị mmepe, yana inye ntinye Linux ngwa ngwa ebe naanị ihe dị mkpa dị mkpa.
Ulo olu: Tomsbsrtbt bụ usoro nnapụta ihe mberede na otu diski diski.
Asụsụ: Obere nkesa gbakwasara ochichi na nchoputa nke netwok.
Linux Vector: Dabere na Slackware, ọ kwesịrị ịrụ ọrụ nke ọma na 32MB nke RAM na 1GB nke draịvụ ike. XFCE / KDE eserese eserese, dabere na ikpe ahụ. Enwere ụdị livecd nke anaghị achọ nrụnye.
Linux ZenWalk: N’oge gara aga, a na-akpọ MiniSlack, nkesa a dabere na Slackware dị mfe ma saa mbara. Ezubere ya maka kọmputa nke na-eme ihe ndị a kacha nta: Pentium III na 128 Mb nke RAM.
Ndepụta zuru ezu nke Linux mini-distros
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Faịlụ FileLet jiri » Kachasị mma Linux Obere nkesa
Sebastian Varela nwere ebe obibi dijo
Akwa! iji tụte igwe ochie gị
Zaghachi Sebastian Varela
otu n'ime ndị kasị mma bụ TinyCore. Ọ dị egwu otú o si amata ngwaike niile na aka ma nwee eserese eserese na n'elu ya ọ nwere ọtụtụ nchekwa. na-eme ka PC ọ bụla na-arụ ọrụ dị ka nke ọhụrụ. enwekwara ụdị ọhụụ na nkwado WIFI yana nhọrọ dị iche iche eserese eserese (naanị 64mb)
Zaghachi Daniel Soster
A na-akpọ Trinux ubuntutrinux na peeji ya bụ http://code.google.com/p/ubuntutrinux/ . Nke ị tinyere na-eduga na cha cha chara n'ịntanetị ...
Zaghachi Paco Puig
Haha! Daalụ maka ozi ahụ. Mmakọ! Paul.
Ha zoputara ndu m ekele m na-acho ihe dika xD
Osa na net. dijo
DSL bụ ọkpọkọ n’agbanyeghi na ahụghị m ụzọ iji wụnye mmemme .UCI ma ọ bụ tinye mgbakwunye Debian (Aghọtara m na ị nwere ike) ... Emere m post banyere ya (http://hayardillasenlared.blogspot.com/2011/06/instalar-damn-small-linux-en-el-disco.html)
Zaghachi Chipmunks na net.
Kechioma! Obi dị m ụtọ na ọ bara uru
Ndewo .. you kwadoro ụdịdị doudoulinux ma ọ bụ ụdị chyme ọ bụla? Enwere m obere akwụkwọ ndetu ya na ce na 128Ram maka obere nke afọ 4…?
Zaghachi Juan Jose Garces Garcia
Ọchịchọ na-akpali mmasị!
Aga m anwale atomik iji hụ ihe ife =)
Ekele m ga-achọ ịma nke n'ime nsụgharị ndị a na-enye ohere njikọ njikọ desktọọpụ.
M tinye abụọ ndị a:
Old Slax, na-enye gị ohere ịmepụta Live-CD nke gị.
New Slax - nhọrọ iji mepụta CD-Live gị adịghị arụ ọrụ ma.
Zaghachi Edwin Morales Z